बाँझोपनको कारण - श्रीमान र श्रीमती दुबै बराबर हुन्छ । - Sukhi Pariwar Clinic
बाँझोपनको उपचारका लागि वर्षौँदेखि मेरो क्लिनिकमा धाइरहेका पुरुष एकदिन करिब १८ वर्षकी किशोरी लिएर आए, मैले छक्क परेर सोधेँ, ‘ओहो !छोरी त कति छिटो यति ठूली पारिसक्नुभएछ त ?’ ५२ वर्षीय ती पुरुष पनि एकछिन् अकमकिए र भने, ‘छोरी होइन, डा. साब, यो त मेरी चौथी श्रीमती हो, यसको पनि बच्चा भएन र उपचार गर्न ल्याएको ।’ उनको कुराले मलाई दिक्क लाग्यो, रिस पनि उठ्यो । वरिष्ठ प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. तुम्ला लाकौल शाहले अगाडि भन्नुभयो, ‘उनी हरेक दुई–तीन वर्षपछि नयाँ श्रीमती लिएर ‘बच्चा भएन उपचार गर्नुपर्यो।’ भन्दै आउने तर आफूचाहिँ उपचार गर्न नमान्ने प्रवृत्तिका थिए । त्यस बेला उमेरै नमिल्ने किशोरीसँग विवाह गरेर फेरि उपचारका लागि आएका थिए । तर मैले ती पुरुषको परीक्षण नगरी युवतीको उपचार नगर्ने अडान लिएँ ।
बाँझोपनको समस्या महिला र पुरुषमा बराबरी नै हुने भए पनि बाँझोपनको सम्पूर्ण दोषचाहिँ महिलालाई नै लगाउने र पुरुषहरु उपचारका लागि नजाने समस्या रहेको छ । यसले गर्दा महिलाले समाजमा अनेक किसिमको अपमान र भेदभाव खेप्नुपरेको छ । बाँझोपनको समस्या महिला–पुरुषमा उत्तिकै जस्तो हुने भए पनि महिलालाई नै किन बढी दोष दिने गरिएको होला ? करिब ३५ वर्षदेखि महिला स्वास्थ्य तथा बाँझोेपनको उपचारमा सम्लग्न डा. तुम्ला शाह भन्नुहुन्छ, ‘शायद पुरुषप्रधान देश भएकै कारणले होला बाँझोपनको समस्यामा पति मात्र होइन परिवार र समाजले पनि महिलालाई बढी दोष दिने गरेको छ । पुरुषहरुचाहिँ आफूलाई सधैँ फिट र स्वस्थ ठान्छन् र उपचारका लागि आउँदैनन् । उनीहरु म ठीक छु भनेर ओभर कन्फिडेन्ट देखाउँछन् । यसले गर्दा महिलालाई बढी समस्या हुने गरेको छ । उनीहरुले परिवारका अन्य सदस्यबाट पनि राम्ररी सहयोग पाएका हुन्नन् । यस्तोमा महिलाले महिलालाई सहयोग गर्नुपर्छ । सासू, नन्द, आमाजू, जेठानीले सही कुरा गरेर सहयोग गर्नुपर्छ । बाँझोपनको समस्या महिला र पुरुषमा बराबर नै हुने हुन्छ भनेर उपचारका लागि दुवैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । एकजनाको मात्र उपचार गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । यसरी नबुझाएसम्म महिलाले भेदभावको सामना गरिनै रहनुपर्ने हुन्छ ।’
हरेक व्यक्ति वा दम्पतीलाई सन्तान कति जन्माउने, कहिले जन्माउने र कति अवधिको ग्यापमा जन्माउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । बाँझोपनको उपचार गरेर व्यक्ति वा दम्पतीलाई सन्तान प्राप्ति गर्ने अधिकार हुन्छ । तर नेपालका विशेष गरी दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा पोषणको कमी, अरु रोगको उपचार कम हुने, अज्ञानता आदि कारणले बाँझोपनको समस्या धेरै छ । उनीहरुलाई नै गरिबी, यातायातको समस्या आदि कारणले गर्दा स्वास्थ्य उपचारमा राम्रो पहुँच हुँदैन । दुर्गम स्थानकाले नै महँगोमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यो समानताको हक विपरीत पनि छ । परिवार नियोजन (Family planning) भनेको बच्चा हुन नदिने सेवा मात्र नभई बच्चा प्राप्त गर्ने सेवा पनि हो । त्यसैले बाँझोपनको उपचार सेवाको पहुँच पनि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्यापउन जरुरत छ ।
An interview session of Dr Tumla Lacoul with News of Nepal
Source : https://www.newsofnepal.com/2021/01/27/379080/